Igbo na agụrụ mụ aha dị omimi,kpọm kwem! - Ọmọ Oòduà
Home / News From Nigeria / Breaking News / Igbo na agụrụ mụ aha dị omimi,kpọm kwem!
Igbo na agụrụ mụ aha dị omimi,kpọm kwem!
Posted by: chucks in Breaking News, Ọmenala ndị Igbo Comments Off on Igbo na agụrụ mụ aha dị omimi,kpọm kwem!
Nwoke be anyị aha ya bụ Irochọnwụ.
Ndị mba ọzọ na akpọ ya Ilochọnwụ.
Ofu ihe/ife ahụ.
Onye na ero iro chọrọ ọnwụ.
Iro iro adịghị mma.
Iro na ebuta ọnwụ,HO! HA!
Onye iro/ilo gị ga enye gị nsi ka Ị nwụọ.
Onye iro gị achọghị ka ihe na agara gị n’ihu/iru.
Onye iro gị ekeghị gị ndụ cha cha!
Irohamụ aka/Irohamụ bụkwa aha ọzọ enyi mụ nwoke na aza,kpọm kwem!
Iro ka nsi.
Igbo Culture	2016-07-30
Previous: Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.
Next: Orisa Obelisque